Fanorona Info. About. What's This?
Andrianjaka dia mpanjaka tao amin ny Fanjakana Merina izay nanapaka tamin ny taona 1610-1630. Zanaka lahin ny mpanjaka Ralambo izy. Vitany ny fanitarana ny fanjakana natombok ireo mpanjaka teo alohany ka tao Analamanga, izay novana anarana hoe Antananarivo, no nataony renivohitry ny fanjakany. Nandry fahalemanana kokoa ny tany tamin ny fitondrany ka nahavitana asa lehibe toy ny fitarihan-drano hanajariana ny honahonan i Betsimitatatra izay nanodidina an Antananarivo, mba hanaovana tanimbary.
Imerina-Ambaniandro dia ny faritra nanjakan-dRalambo. Ralambo, no namorona ny teny hoe Imerina - Ambaniandro teo Ambohidrabiby, izay renivohi-panjakany. Roa amby roapolo km miala anAntananarivo aminny làlana mankany Anjozorobe no misy anAmbohidrabiby, vohitra miorina eo antampon-tendrombohitra efa hatraminny taonjato faha-16. Teo Ambohidrabiby no namorona sy nametraka soatoavina maro Ralambo sy ny Andriandoriamanjaka, mpanolotsainy, koa isanizany ny anarana hoe "Imerina-Ambaniandro".
Ny Testamentani Salomona na Testamentani Solomona dia lahatsoratra apokrifa izay atao hoe nosoratani Salomona na Solomona, nefa voasoratra taminny taonjato voalohany. Io boky io dia tsy hita afa-tsy ao aminireo loharano apokrifa kristiana. Tsy hita ao aminny Tanakh na ao aminireo loharano jiosy hafa izy. Tantarainy ny fomba nanamboarani Solomona ny Tempoly taminny fibaikoany ireo demony taminny alalanny peratra majika izay nampindraminny arikanjely Mikaela azy. Miresaka momba ny arikanjely hafa toa ani Oriela koa io soratra io. Ahitana tantara izay mety ho loharano nahazoana ilay angano at ...
Ny fanorona dia lalaon-tsaina nenti-paharazana malagasy. Olon-droa no mifanandrina aminizany ary mandany ny vatonilay mpifanandrina ny tanjona, toy ny ady. Rehefa maty kosa ilay mpifanandrina iray, dia azo avela koa dia miroso aminny fomba filalaovana antsoina hoe vela ny mpifanandrina roa, mba ahafahanilay maty taminny voalohany ho afa-bela.
Ny tanjonny fanorona dia tsy ny hamono ihany, fa ny mamelona ihany koa ilay mpifanandrina maty taminny lalao voalohany. Ny fanorona ihany angamba ny lalao eto an-tany izay tsy mamono ihany fa mamelona ihany koa.
Marihina fa fady ny miloka aminny fanorona satria ilay lalao rahateo dia saro-pady aminny malagasy.
1.1. Tantara Ny fiandohana
Taminny andronny mpanjaka Andrianamponga tao Ifanongoavana, tany aminny taona 1340 tany ho any no nahitana taratra voalohany ny fanorona. Tsy fantatra nefa ilay karazana fanorona taminizany
Taminny androni Andriamanelo taty aoriana no ahenona indray ny momba ny fanorona aminny anarany fototra hoe SoratrAndriamanitra.
Io anarana io dia avy aminny tantara fototry ny fanorona. Taminizany fotoana izany, efa ela be, dia navorinAndriamanitra ireo mpahay raha rehetra teto an-tany ary izao no fangatahany: mba hanomezanireo mpahay raha ireo azy sary na soratra iray maneho izao tontolo izao aminny endriny rehetra sy ny fihetsikiny. Rehefa nandinika ireo mpahay raha dia sora-panorona no natolony anAndriamanitra. Izany no nahatonga ilay anarana hoe SoratrAndriamanitra.
1.2. Tantara Ny fanorona sy ny faminaniana
Ny Ntaolo dia nametraka fa miainga aminny fanorona ny faminaniana ny zavatra mety hiseho, indrindra ho anny mpitondra tafika.
Raha naniraka olona hiantso ny zanany lahimatoa Andriatompokoindrindra ny mpanjaka Ralambo ahalalàny ny heviny momba ny fanjakana, izany hoe vonona handray ny fanjakana ve izy sa omena ilay zandriny Andrianjaka ity farany, dia naminany taminny fanorona i Andriatompokoindrindra.
Ny fanorona rehefa ampiasaina aminny faminaniana dia manome valinteny telo:
raha resy ny mpilalao dia ratsy ho azy ny valinteny;
raha mandresy ny mpilalao dia vokatsoa ho azy;
Rehefa naminany ary i Andriatompokoindrindra, dia telo noho dimy ny vokatra azony, dia niteny izy hoe "Lazao ny raiko fa mbola mamonoa telo noho dimy aho". Saingy, ny telo dia tsy ahafaty ny dimy izany mihitsy aminny fanorona: resy izy no dikanizany fa mbola miala-nenina sao lahy ka mbola ho sahala ilay lalao. Mazava be ary ilay valinteny nomeny ny iraka ho ampitaina any amin-drainy fa dia resy izy ary ratsy ny valinteninilay fanorona aminy ka tsy afaka handray ny fanjakana izy.
Azo anomezana tsodrano koa ny fanorona. Raha nitsodrano anAndrianampoinimerina i Ramorabe dia nisoritany taminny tany ny fanoron-telo dia hoy izy hoe "Ianao no eo aminny fonabenImerina". Ny fonabe dia ilay laka eo ampovoanny fanorona izany hoe izy izany no manjaka eo aminilay tany.
2. Filalaovana fanorona
Misy karazany maro ny fanorona, fa ny tena maro mpahalala dia ny fanoron-tsivy sy ny fanoron-telo. Toy izao no endriky ny kianja ilalaovana ho anny fanoron-tsivy: soritana tsipika 5 mitsivalana sy mirazotra ary tsipika 9 mitsangana sy mirazotra ihany koa izay manome efajoro misy efitrefitra 32. Avy eo dia asiana tsipika iray avy ao anatinny efitrefitra tsirairay izay mampitohy ny zorony roa aminny efitrefitra, izany hoe tsipika mihorirana ka ampifandimbiasina ho tsipika mianjera mankany aoriana sy mankany aloha izany. Ho anny fanoron-telo dia mitovy aminny fanoron-tsivy ihany, fa tsipika 3 mitsangana sy tsipika 3 mitsivalana ihany no soritana.
Ny fihaonanny tsipika no toerana ametrahana ny vato holalaovina, ary ny ivo indrindra aminireo no atao hoe laka.
Aminny fiantombohanny lalao dia alahatra eo aminio kianja io ny vatonny mpifanandrina izay miisa 22 avy, miloko mainty sy fotsy, ka ny laka ihany no tsy misy vato. Ny tanjona dia ny hanafoana ny vato rehetra anananny mpifanandrina, ka izay mbola manana vato tavela no mpandresy.
Lalao ankafizinny Malagasy tokoa ny fanorona. Misy lovan-tsofina mitantara fa nisy mpanjaka anankiray izay namoy ny fanjakany iray manontolo mihitsy noho ny fitiavany anio lalao io.
Aminny fotoana anisahana ny vato dia esorina ny vatonny mpifanandrina izay hatonina na isintahana, raha toa ka vatonny mpifanandrina no akaiky indrindra ny toerana iharanny hetsika atao fa tsy toerana tsy misy vato na toerana misy vatonilay manisaka.
Raha samy misy vatonny mpifanandrina ny toerana nihatahana sy ny toerana hatonina, dia misafidy ilay manakisaka na ny eo alohanny hisaka no esorina na ny tato ivohony.
Raha toa ka mbola anny mpifanandrina ny vato ao ambadikilay vatony esorina, dia miala daholo koa izay vatonny mpifanandrina mitandahatra amininy tsipika iny, mandra-pisy vatonilay manisaka na toerana fotsy.
Mifandimby manisaka ny vatony aminny toerana iray mbola tsy misy vato ny mpifanandrina. Ny fanisahana ny vato anefa dia tsy maintsy manaraka ny tsipika mitsivalana na mitsangana na mihorirana izay efa nosoritana.
Raha mahaisotra vatonny mpifanandrina ny hetsika anankiray dia mbola afaka manohy manisaka ny vatony ihany ny mpilalao fa tsy miova ny anjara. Tsy maintsy ilay vato nahisaka ihany no azo akisaka. Tsy azo atao koa ny miverina aminny toerana efa nipetrahaniny vato iny.
Teti-panorona tetika + fanorona: milaza tetika maty paika na drafitra nalamina milahadahatra hahatongavana aminny tanjona iray. Ohatra: Nanaovana teti-panorona mihitsy ny nisamborana ilay jiolahy raindahiny.
en) Tetikasa fanorona hafa sahanina vahiny, applet sy fango Java
mg) Tetikasa fanorona iray sahanina Malagasy
mg) Tetikasa fanorona vita aminny Python sahanina Malagasy
zanany roalahy. Andriantompokoindrindra hono dia nandà satria mbola hamono fanorona telo noho ny dimy araka ny ana - drainy manao hoe tsy mety ny resy am - panorona
ny akora nanamboarana azy sy ny didiny. Lambahoany Malabary Masonjoany Fanorona Katro Ankamantatra Tsikonina Tsobato Diamanga Moraingy Savika Tantaran i
978 - 2 - 7143 - 1000 - 2 vol.2, conte 99 : L Esprit dans la bouteille Karazana fanorona ny Pentalfa. Wilhelm Gundel, Dekane und Dekansterbilder, pub. J.J. Augustin
checkers board, draughts,